Wool ipholiyesta yengubo
Ngaba siya isampuli ye reference?
Jabulani ukuthumela iisampulu efanayo okanye efanayo ngesandla for free.New abathengi kufuneka ahlawule imirhumo express, uya abuyisele xa indawo umyalelo yamatyala; ukuba kufuneka sampula efanayo njengoko yourrequired, kufuneka ukuba ahlawule intlawulo isampulu, xa indawo umyalelo yemveliso bulk, uya ukubuyisela lo ntlawulo.
Koda kube nini uya impahla yam ukulungele ukuthunyelwa?
amalaphu imigaqo ezahlukeneyo deliver.As ezahlukeneyo njengesiqhelo, iintsuku zomsebenzi 15-25.
Kuthekani MOQ wakho?
Ikakhulu 2000m for amalaphu. (Ngaphandle iinkcukacha ezizodwa amalaphu)
njani kungekudala ndifumana quote ixabiso?
Niya kuwuthetha kwaoko, xa ukhetha izinto zethu, ngoko sicaphula ixabiso ngamini-nye zomsebenzi ngokwemfuneko yakho.
T / T okanye L / C kwi emehlweni.
Yintoni nokupaka yakho?
Kuba amalaphu: Enye incwadi esongwayo polybag mnye, kwaye outside cover i PP Bag. Kwakhona couldaccording ku iiyunifomu yakho requirement.For, omnye elibekiweyo polybag nye, yaye zonke iiseti 20 zipakishwe elinye ibhokisi. Kwakhona akwazi ngokwemfuneko yakho.
Indlela ukuqinisekisa umgangatho phambi ukuze?
We nindisize you ezamahala isampuli esithe efumanekayo kwakhona yakho. Okanye uthumela iisampulu bakho kuthi, ke ngoko siya kwenza isampuli counter ukuba imvume yakho phambi kokuba umyalelo.
Indlela yokusombulula iingxaki umgangatho emva yokuthengisa?
(1) Thatha iifoto iingxaki uze uthumele kuthi.
(2) Thatha iividiyo yeengxaki ze uthumele kuthi.
(3) Thumela umva le amalaphu ingxaki kakubi echaza us.After siqinise iingxaki, ezifana okubangelwa ngomatshini, ukudaya okanye ushicilelo, njl, kusele imihla emithathu, siya kwenza le program anelisekile kuwe.
Yiyiphi izinto i isuti sifihle wenza ...